ကန့်သတ်ထားသောစျေးနှုန်းထက်ဝက်လျှော့စျေး | DaysiDisk | ငါက Mac ကပါ
ကျွန်ုပ်တို့ထံ၌ရှိသော Mac App Store ၏လျှောက်လွှာများကိုဆက်လက်လျှောက်ထားပါမည် ကန့်သတ်အချိန်လျှော့စျေး။ ဤတစ်ကြိမ်မှာတော့ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကလေ့လာပြီးသော application တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည် application ၏လှပသော interface နှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောကုန်ထုတ်စွမ်းအားလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်အလွန်သဘောကျခဲ့သည်။ DaysiDisk ကို Apple ၏အွန်လိုင်းစတိုးတွင်ပုံမှန်ဈေးနှုန်းထက်ဝက်ခန့်သာရနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Mac အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးသည်။
DaysiDisk နှင့်ဆင်တူသည့် application များရှိသည် (သို့) သင့်အများစုသည် Mac ကိုအချိန်မရွေးထိန်းသိမ်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအသုံးမပြုသောအရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူလမ်းအတွက်လုပ်ဖို့သွားကြသည်.
DaysiDisk အပလီကေးရှင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်ရှိသည့်ဖိုင်များအားလုံးကိုဖယ်ရှားရန်ခွင့်ပြုသည်။ ရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြင့်အသုံးမပြုတော့ပါ။ ငါတို့လုပ်ရမယ့်တစ်ခုတည်းသောအရာက discs တွေကိုသို့မဟုတ်ဖိုလ်ဒါများကိုလှန်လှောကြည့်ပါ ကျွန်တော်တို့မှာ Mac မှာရှိတယ်၊ သူတို့ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့နဲ့ငါတို့ပိုကြီးတဲ့ဖိုင်တွေဒါမှမဟုတ်ငါတို့မလိုချင်တဲ့ဖိုင်တွေကိုပြဖို့အတွက်သူတို့ကိုရွေးပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားသောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဖိုင်များပါသောဂရပ်တစ်ခုကိုပြသပြီးကျွန်ုပ်တို့ဖျက်လိုသည့်မလိုချင်သောသို့မဟုတ်ဟောင်းနွမ်းသောဖိုင်များကိုဆွဲယူရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
Mac ပေါ်မှာနေရာယူတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကြည့်ရတာတကယ်ကောင်းပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုရှင်းလင်းခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ် လျှောက်လွှာဖိုင်များအလိုအလျှောက်ဖျက်ပစ်မထားဘူးဖိုင်တစ်ခုလုံးကိုပြပြီးအသုံးပြုသူမှသူတို့ဖိုင်တွဲ (သို့) Mac disk ထဲတွင်မထားလိုသောအရာကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်။
သင်မဝယ်ယူမီ app ကိုစမ်းသုံးလိုပါက၎င်းကိုသင်ရယူနိုင်သည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူနှင့်ထံမှ လုံးဝအခမဲ့စမ်းသပ် trial ကို download လုပ်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည် tool ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသိပြီးနှင့်စျေးနှုန်းအပေါ်ဤ 50% လျှော့စျေးခံစားချင်လျှင်, သင်ကမှတိုက်ရိုက် download လုပ်ပါ Mac က App Store ကို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » Mac က App Store ကို » DaysiDisk ကိုကန့်သတ်ထားသောစျေးနှုန်းထက်ဝက်လျှော့စျေး
Foxconn မှ Sharp ၏ဝယ်ယူမှုသည် Apple ကိုအကျိုးပြုသည်
Mac အတွက် Office 365 ကိုကြိုးစားကြည့်ပါ။ Microsoft ကသင့်ကိုရှာနေပါတယ်